Allgedo.com » Beelo ku dagaalamay Galgaduud oo loogu baaqay in ay colaada joojiyaan
Beelo ku dagaalamay Galgaduud oo loogu baaqay in ay colaada joojiyaan
Waxaa iska soo daba dhacaayo baaqyo kala duwan oo loo diraayo Jufooyin walaalo ah oo ku dagaalamaya qeybo kamid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha somalia.
Dagaal aad u culus oo gaystay qasaaroyin dhimasho ayaa waxaa uu ka dhacay tuulooyin ku yaalla gobolka Galgaduud waxaana jiray in dad badan ay ku dhinteen dagaalkaas.
Mid kamid ah Nabadoonada Deegaankaas kasoo jeeda ayaa u diraya Baaq waa Nabadoon Xasan CIlmi oo u soo jeediyay in beelaha ku dagalamaya deegaanka Baalaldheere ee gobolka Galgaduud ay joojiyaan dagaalka kuna badalaan wadahadal oo ay wada fariistaan.
Dagaalkaan oo u dhaxeeya beelaha Saleeban iyo Duduble oo ka tirsan Beelaha Hawiye ayaa waxaa jira dhimasho iyo dhaawacyo soo kala gaaray dhinacyadas.
Isku dhac beeleedkaan ka dhacay gobolka Galgaduud ayaa waxaa ku geeriyooday 35 qof halka tiro kale oo dhaawacyo ah la gaarsiiyay magaalooyinka ku dhow deegaankas.
Si kastaba dagaalada sokeeye ee dhexmara beelaha somaliyeed ayaa ahaa mid soo jireen ah boqolaalkii sanno ee lasoo dhaafay.
2 Jawaabood " Beelo ku dagaalamay Galgaduud oo loogu baaqay in ay colaada joojiyaan "
waa arin wanaagsan in nabad loogu yeero beelo is dagaalaya.laakin nabadoonku beeshiisa uu matalo.nabad nabad mahaysataa,waa maya bal marka koowaad kkisa daryeelaa ku kale kudara ,ee beeshiisa uu asagu kala geeyay nabad haka dhex raadiyo haddii xilka uu sheeganayo masuuliyadeda qaadi karo
Taliyaha ciidammada ASWJ ee degmada Ceelbuur Cabdi Xasan Maxamed oo la hadlay WAAJIDPRESS IYO RADIO MUQDISHO ayaa sheegay in malleeshiyaadka uu watay horjoogge Yuusuf Sheekh Ciise Kabakudukade ay isaga carareen deegaanno ay ka mid yihiin Gal hareeri, Gal-cad, Masagawaay iyo deegaanno kale, halkaasi oo ay ku fool leeyihiin ciidammada ASWJ.